အသက် ၃၅ နှစ် - ED ကုသခြင်း၊ Plus အကြံပြုချက်များ၊ ဖတ်ရန်အကြောင်းအရာနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် ၃၅ နှစ် - ED ကုသခြင်း၊ ထို့အပြင်သိကောင်းစရာများ၊ စာဖတ်ခြင်းအကြောင်းအရာနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ
[35, M က] ခင်မှာ / စဉ်အတွင်း / ကြှနျတေျာ့ကွာရှင်းပြီးနောက်ကျွန်မအကြောင်းကို6နှစ်ပေါင်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်, ညစဉ်ညတိုင်း PMOing, တော်တော်နက်ရှိုင်းသည့် PMO ယုန်ပေါက်သို့သွားလေ၏။
သုည Signal ဃထဲကနေကျွန်မရဲ့လှပသောအသစ်ကရည်းစားအိပ်ရာမှာလာမယ့်ငါ့ထံသို့အဲဒီမှာလဲလျောင်းခဲ့ပါတယ်, ငါ 0% စိုက်ထူမှာခဲ့ပါတယ်။ ငါမဟုတ်ဘဲအစဉ်အဆက်ကိုထပ်ကြောင်းဖြတ်သန်းသွားထက်သေဆုံးချင်ပါတယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားကျိန်ဆို။ လှုံ့ဆျောမှုအကြောင်းပြောဆို!
ကြောင့်မြင့်မားတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ရန်, ငါကမြင်နိုင်အမှတ်အသားများစွန့်ခွာမည်ဟုရှိရာအမှတ်, ငါ့အိပ်စက်ခြင်းအတွက်ငါ့မျက်နှာကိုကုတ်လိမ့်မယ်။ ငါကြောင်တစ်ကောင်နှင့်အတူတစ်ဦးရန်ပွဲကိုဆုံးရှုံးလျှင်ပြည်သူ့ငါ့ကိုမမေးလိမ့်မယ်။
ငါ fapping မပါဘဲအိပ်မရနိုင်ဘူး။ ကျွန်မထိုမြို့၌အိပ်ခြင်းနှင့်နေရောင်အောက်တွင်အရာရာကိုစိုးရိမ်လိမ့်မယ်။
အိပ်ပျော်နေချိန်မှာငါသည်လည်းငါ့သွားကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်လိမ့်မယ်။ ငါသည်ငါ့အံသွားချဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ယခုအိပ်ပျော်ခြင်းမှတစ်ဦး nightguard ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ ငါ၏အသွားဆရာဝန်ငါသည်ဤဆက်လက်မယ်ဆိုရင်အဓိကပါးစပ်တွင်းအလုပ်လိုအပ်ပါမယ်ပြောတယ်။
အကြှနျုပျ၏လက်ဝဲပခုံးဓါးကြောင့် edging နာရီကြောင့်ထပ်တလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုအားလုံးကိုအဆက်မပြတ်နာကျင်မှုအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အသုံးမကျသော, ပျင်းရိ။ ငါအကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးလျင်မြန်စွာထို့နောက်စီမံကိန်းစတင်ရန်ချင်ပါတယ်။
မေ့လျော့, ရိုင်းစိုင်း, antisocial အပြုအမူ။ တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုတိုက်ရိုက်ပြောနေတာသောအခါကြှနျတေျာ့စိတျကိုလှည့်လည်လိမ့်မယ်။
ပင်ဖော်ရွေလုပ်ဖော်သို့မဟုတ်ငါ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုနှင့်အတူ, လူမှုရေးအခြေအနေများရှောင်ရှား။ ငါအချို့မိုအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်း၏မျက်နှာသာအတွက်, မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆင်ခြေစေလိမ့်မယ်။ ငါအစစ်အမှန်ဘဝကနေဆုတ်ခွာခဲ့သည်။
အိပ်ရာထဲကရတဲ့နှေးကွေး။ ငါသည်အခြား 8 အဘို့အညာဘက်ကိုပြန်သွားနိုင်တူသောတောင်မှအိပ်ပျော်ရာ 8 နာရီအကြာတွင်ကျွန်မခံစားခဲ့ရပါတယ်။
ဝါသနာကိုလိုက်သို့မဟုတ်ထွက်အလုပ်လုပ် Little ကစွမ်းအင် / လှုံ့ဆျောမှု။
ငါအမြိုးသမီးမြားနှငျ့အကြှနျုပျကိုငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုဖန်ဆင်းသောအနိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှု, ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါငါ့အသက်ကိုသို့မဟုတ်မအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်အခြေခံသည်ငါ့ပျော်ရွှင်မှုကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ရည်းစားငါနှင့်အတူအတက်ကိုချိုးဖောက်အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်လောင်စာအိပ်မက်ဆိုးရှိသည်မယ်လို့, ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုသင်တန်း၏အလှည့်အတွက်တကယ်အသက်တာ၌ငါနှင့်အတူအတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ကသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့သောငါ၏နှိုးအသက်, ကူးဖိတ်။
ED သွားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါ၏အဂျာနယ်မှာပြန်ရှာနေ: ငါ့နံနက်သစ်သားငါနေ့5အပေါ် 14% စိုက်ထူမှာလိင်ရှိသည်နိုင်သူဖြစ်ရမည်, နေ့ 80 အပေါ်ဘို့အခြောက်နိုင်ခဲ့သည်, နေ့ 27 အပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ နေ့ 100 မှာ 30% ပြီးပြည့်စုံစိုက်ထူနှင့်အတူလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နယူးနှစ်ဧဝနေ့ 62 အပေါ်လိင်သုံးကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါ NoFap စတင်ကတည်းကတစ်ချိန်ကငါ့မျက်နှာကိုပေါ်ခြစ်အတူတက်ရောက်ပြီးကြပြီမဟုတ်။
ငါတော့ဘူး teethgrinding မှငါ့ဗိမာန်၌ခေါင်းကိုက်နှင့်အတူနိုးထ, ဒါပေမယ့်နေဆဲငါအမှု (ဆရာ '' အမိန့်) တွင်ဖွင့်အိပ်သောအခါ mouthguard ဝတ်ဆင်ကြဘူး
ငါ၏အ shoulderblade အတွက်နာကျင်မှု 90% သွားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းအမှန်တကယ်ကြောင့်နောက်ဆုံးနည်းနည်းတက်လျှော့ပေးရေးကိုကူညီယခုအလုပ်လုပ်ကြသည်။
သည့်အခါ flaccid အကြှနျုပျ၏: D အစားအလွန်အကျွံအလွဲသုံးစားမှုထံမှဖုံးကွယ်ဖို့အားလုံးကိုအချိန်အထိ shriveling ၏, ကြင်ချဆွဲထားတဲ့။
နှောင်းပိုင်းတွင် PMO တက်တည်းခိုမဟုတ်ငါ့ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်နာရီမှာအိပ်ရာကိုသွားခွင့်ပြုပါတယ်။ ငါတစ်ဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့ပယ်ရဖို့တဗီဒီယိုန်းကျင်ရှာနေတာကြောင့်ယခုနေ့စဉ်အိပ်ပျော်ရာအနည်းဆုံးတစ်ဦးအပိုဆောင်းနာရီလာပြီပေါ့။
အကြှနျုပျ၏မကျြစိကိုငါမတိုင်မီရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသောသူတို့အဖို့အရောင်အဝါ / ဘဝကိုရှိသည်။ မျက်စိအောက်မှာအမှောင်စက်ဝိုင်းလျော့ကျလာနေကြသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပုံ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Psycho-Cybernetics စာအုပ်ကိုကြည့်ပါ) နှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုအတွက်လည်းအချိန်ယူပြီး၊ ချိန်းတွေ့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်ဇနီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည် - ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်လာသောအခါဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ အချစ်ဆုံးအမျိုးသမီးများနှင့်အမှတ်ရခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတည်ပြုရန်မချိန်းတွေ့ရန်ကျွန်ုပ်သည်မမျှော်လင့်တော့ပါ။
ကျွန်မအလုပ်မှာပိုကောင်းတဲ့အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်များကိုမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ ငါအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်အပြင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအချိန်အလုပ်စတင်လုပ်ကိုင်။ ကြှနျတေျာ့သူဌေးကမကြာသေးမီကသူ (ဒီ dude တူချီးမွမ်းပေးသည်ဘယ်တော့မှ) ငါနောက်ကျပိုပြီးစီမံကိန်းများအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းခဲ့တာကိုသတိထားမိခဲ့သည်ပြောတယ်။
ယခုတွင်ငါသည်4ကြိမ်တစ်ပါတ်ထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့စွမ်းအင်ရှိသည်။ ငါတောင်ငါ့အနေ့လည်ခင်းကယ့်ကိုအလုပ်များဖြစ်သွားလျှင်အလုပ်မတိုင်မီအလေးရုတ်သိမ်းပေးရန်စောစောထရ။
အကြှနျုပျ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားပုံမှန်ပြန်သွားကြပြီ။ ငါစောင့်ကြည့်ခဲ့ကင်လုပ်ခိုင်း, နယ်စပ်ဒေသတရားမဝင်အမှိုက်သရိုက် dehumanizing, လက်မှလုံးဝဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြင်သူသည်ငါ၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအဲဒီဖိုင်တွေကိုကြည့်ရှုကြပါလျှင်ငါ mortified ကြပြီ။
ငါ၏အလုပ်ဖော်အချို့သည်ငါ "အငယ်ကိုကြည့်ရှု" ငါ့ကိုပြောနှင့်ပြီနှင့်အခြားငါ "ပျြောရှငျကြည့်ရှု" ဟုပြောသည်။
ငါမည်သူမဆိုငါ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဆဲလ်ဖုန်းချေးနှင့်သူတို့တစ်ဦးညစ်ညမ်း stash ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကိုမကြောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ စင်ကြယ်သောဖုန်းကိုစင်ကြယ်ကွန်ပျူတာ, သန့်ရှင်းသောသြတ္တပ္ပစိတ်စင်ကြယ် Self-image ကို။
အကြှနျုပျ၏ကွန်ပျူတာပိုမြန်ယခုညစ်ညမ်းတဲ့တစ်တန်အတူတက်ပိတျဆို့နတေဲ့မဟုတ်ရဲ့ပြေး။ (ကအသေးစားပေါင်း, ဒါပေမယ့်တိုင်းနည်းနည်းကူညီပေးသည်။ )
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း: ယင်း၏ပုံစံများအပေါငျးတို့သ၌သင်တို့၏ porn stash ဖျက်ပစ်ပါမည်။ ခလုတ်အကြောင်းအရာရှိသည်သောဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှမသွားပါစေနဲ့။ သင့်ရဲ့ဃမထိမခိုက်
YBOP အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာပေး, အခြားယောက်ျားတွေ '' အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုဖတ်ရှု, သင့်ခရီးအတွက်မျှော်လင့်သောအရာကိုလေ့လာပါ။
သင့်ရဲ့အဓိကအစပျိုးခြင်းတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဖော်ထုတ်သူတို့အပေါ်မှာခေါင်းရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ မိုင်း (နိုင်ရန်အတွက်) ကြ၏တော့ပူပန်, မောပန်းခြင်း, ဝမ်းနည်းခြင်း, ရှည်လျားလွန်းအိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်း။
ရမ္မက်အဘို့အစီအစဉ်, တစ်ဦးရန်ပွဲအဘို့ကိုယ့်ကိုယ် ပြင်ဆင်. , သူတို့အား motherfuckers တိုက်ခိုက်ရန်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် !! ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် - အစောပိုင်းအပေါ်မှာငါ့ NoFap ရှာပုံတော်၌ငါကောင်းကောင်းမသွားခဲ့ပါဘူးတဲ့ပထမဦးဆုံးအရက်စွဲသွားကြ၏။ drive ကိုနေအိမ်တွင်, ငါကိုအနည်းငယ်နှိမ့်ချခံစားရတယ်, အတိတ်တွင်ငါသည်ငါ့စိတ်ပျက် medicate မှ PMO ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကတည်းကငါကဒါကြောင့်မဆိုးခဲ့ကျော်လွှားသည်တတ်ပြီးအပြည့်အဝအသိအမြင်နှင့်မျှော်လင့်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။
hard mode ကိုငါ့အပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ငါ့အဘို့ဖြည့်စွက်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးများအတွက်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏မိန်းကလေးအရူးအချိန်ဇယားအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါကြောင့်ငါလွယ်ကူ Mode ကို၏ရက်သတ္တပတ်ခက် Mode ကို၏ရက်သတ္တပတ်များကတက်ခွဲရှိသည်။
ခက် Mode ကို၏စကားပြောသော, အ Chaser Effect အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါခက် Mode ကိုစဉ်အတွင်း FAP အနည်းငယ်သာတိုက်တွန်းခဲ့ပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီကျနော်တို့ငါ၏အ FAP ရမ္မက်အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်နောက်တဖန်လိင်ဆက်ဆံစတင်အဖြစ်, ဒါပေမယ့်နေဆဲဖြစ်နိုင်သောကျော်လွှားရန်။
မကြာခဏအထဲတွင်ရေးရန်တစ်ဂျာနယ်ထားပါ။ ယင်းမတရားသောမကောင်းတဲ့ခဲ့ကြသည်အခါ, ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဝေးလွန်းလာပါတယ်ဘယ်လိုကြည့်ပါ, ငါ့ဂျာနယ်ကိုကြည့်လိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကရှာတွေ့ချင်ကြဘူးလျှင်ပေါ်မှာ password ကိုထားပါ။
သင့်ရဲ့အပိုစွမ်းအင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့တန်ဖိုးရှိရှိတစ်ခုခုကိုရှာပါ။ နောက်ကျောကိုသင်ပျော်ရွှင်စေ, ဒါမှမဟုတ်အသစ်တခုဝါသနာကိုရှာဖွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုများသို့ရယူပါ။ ငါ (အောက်တွင်ငါ့အအကြံပြုစာဖတ်ခြင်းအပိုင်းကိုကြည့်ပါ), နောက်တဖန်ငါ၏အဂစ်တာကစားအားကစားရုံသွား, ဘယ်လိုထက်ပိုလွယ်ပြီးခေတ်ဆန်သောဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့, ပိုမိုအာဟာရချက်ပြုတ်စားရန်ကိုဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, နှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစာအုပ်တွေဖတ်နေတော့တာပဲ။
ဓာတ်လှေကားလေး။ ငါသည်ဤကူညီပေးသည်မည်မျှအလေးပေးလို့မရပါဘူး။ သငျသညျ Self-သတိ feeling နေတယ်ဆိုရင်: အစားအခမဲ့အလေးများ၏စက်ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်သည်အဘယ်သို့စက်တွေကိုသုံးပါရန်မစိတ်ကူးရှိပါကအားကစားခန်းမမှာဝန်ထမ်းသင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးသည် T ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ထားအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူးလျှင်ချွေးထွက်ဝတ်ဆင်။ မည်သူမျှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားသဖြင့်စီရင်၌သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုရန်အားကစားရုံအဖွဲ့ဝင်များအတွက်ပေးဆောင်ပါကအေးမြပါတယ်။
ပြင်ပ Get လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေကိုရှူရှိုက်ခြင်း, သဘာဝအလင်းထဲသို့။ ကျနော်တို့မီးစတုဂံကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြန်လည်လေကြောင်း 24 /7အသက်ရှူဖို့ရည်ရွယ်မခံခဲ့ရပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့အခြားသူများထက်ကဝန်ခံဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်ပြီးသားကိုသင်တို့သိကြ၏။ ငါတိုးချဲ့ flatlines သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောစိတ်ကျရောဂါဖြတ်သန်းသွားသူကိုယောက်ျားတွေ, ညာစားခြင်းအထဲကအလုပ်လုပ်နှင့်ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားရတဲ့ဤနေမကောင်းဆိုးကျိုးများလျော့နည်းကျဆင်းနိုင်သည်ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ယုံကြည်တယ်ပေါ့။
သင်သည်သင်၏လမ်းပေါ်မှာဆိုရင်ပြီးတာနဲ့ပြန် NoFap သို့ log ့ထွက်စတင်ကြသူအချို့ယောက်ျားတွေကိုကူညီပေးပါတယ်။ သင်နှင့်အလားတူပြဿနာများရှိခြင်းကြသူ, အကြမ်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်ယောက်ျားတွေ / gals တွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဖြစ်နိုင်သငျသညျစတင်တဲ့အခါသင်ခဲ့ကြရုံလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိနဲ့အားပေးမှုတစျမြိုးစကားလုံးများ၏လိုအပ်ချက်အတွက်ခံစားပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ကြောင့်ပေးဆောင်ပါကအလွန်ကြီးစွာသောခံစားချက်ရဲ့ !!
ရုံ NoFap ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုကောင်းတည်၏ဗိမာန်တော်၌တဦးတည်းအုတ်ကြောင်းကိုသတိရပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း, အာဟာရ, လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေ, သဘာဝနေရောင်ခြည်, အခြားသူများနှင့်အတူအသိုင်းအဝုိင်း, သင်ယူခြင်း / ဝါသနာနှင့်အကျိုးစီးပွားတိုးတက်အောင်အားလုံးအတူတကွအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်မကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခြင်း, တစ်ဦးတည်းသောက်သုံးခြင်း, ငါ့တိုက်ခန်းအတွင်း၌ငါ၏အအားလပ်ချိန်မှာအချိန်အားလုံးဖြုန်းဖို့သုံးနှင့်အထွေထွေဘဝအကြောင်းကိုမကောင်းတဲ့ feeling ။ ငါပြင်ပကမ္ဘာကိုကြောက်ခဲ့တာ, ငါမယ့်အစားငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကျော်တာဝန်နှင့်အေဂျင်စီတာ၏ (ဇနီးဟောင်း, ယုတ်သူဌေး, asshole လုပ်ဖော်, etc) ကမ္ဘာပေါ်မှာလူတိုင်းနှင့်အခြားအရာအားလုံးအပေါ်မှာငါ့အပြုအမူလို့အပြစ်တင်ပါတယ်။ ငါတဖြည်းဖြည်းအမှုအရာပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ fapping မရှိဘဲယခုငါ့အသက်ကိုဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ပါသည်, ငါတောင်ညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေဒါမှမဟုတ် option ကိုငါဘိန်းဖြူရိုက်ကူးတစ်ခုသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်မှာရေသွန်ရန်ငြင်းဆန်ကိုကြည့်သောတူညီသောလမ်းအဖြစ်ပယ် jerking ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး။ ကိုယ့်တူသောအရာတို့ကိုပြုသောသူကောင်လေးများ၏ကြင်နာဘူး။
Kratos လမ်းညွှန် - သင်တိုင်းနေ့ပါသလားသင့်သ 16 အလေ့အထများ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်စေရန်မည်သို့အခမဲ့အွန်လိုင်းစာရင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျ NoFap ချရရှိပါသည်တစ်ချိန်ကစတင်ရန်တစ်ဦးကတော်တော်လေးနေရာကောင်း။
Psycho ဆက်သွယ်မှုလေ့လာရေး - အပြုသဘော Self-အမှန်တကယ်မှတဆင့်တစ်ဦးအပြုသဘော Self-image ကိုမွေးမြူဖို့ကိုဘယ်လိုအပေါ်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေစာအုပ်။ အခြေခံအားဖြင့်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်ချင်သောဘဝနေထိုင်နေကိုယ့်ကိုယ်ကို၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ဖန်တီးဖို့နဲ့အချိန်အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ကြောင်းလမ်းကြည့်ဖို့စတင်ပြုလုပ်နေထိုင်ကြသည်။
သူငယ်ချင်းများနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြည်သူ့အနိုင်ရမည်ဟုလုပ်နည်း - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှုထောင့်ကနေတိကျမ်းစာ၌လာသည်, ဒါပေမယ့်အလွယ်တကူပုံမှန်ဘဝကိုအသုံးချနေသည်။ (ငါကဲ့သို့သော) အဆင်မပြေသိပ္ပံမလိုလားအမျိုးအစားများများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေ။
ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားများ - သင့်အကျိုးအတွက်မှခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားသုံးစွဲဖို့သင်မည်သို့ပြောပြသည်။ သင်သည်အမှုရောက်သောမျက်စိရှိလူများရှာဖွေနေရှိပါကသူတို့နှင့်အတူစကားပွောပါကစာသားရှိရာအရပ်၌သင်တို့စကားပြောနေတဲ့သူပေါ် မူတည်. သင်၏မျက်စိထားရန်သင့်အားပြသ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အခြေအနေကအခါ။
မော်ဒယ် - ဤစာအုပ်အခြားထက်ပိုငါ့ကိုငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုမိန်းမနှင့် dweeb နှင့်မည်သို့ပြုလုပ်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်ခြင်း၏ငါ၏အကိစ္စရပ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကူညီပေးခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမပိုမစ္စတာ Nice Guy - "Nice ယောက်ျားများ" စော်ကားသော asswipes ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲပိုပြီးမှနျကွောငျးဝနျခံသောဖြစ်လာကူညီပေးသည်။ ငါသည်ငါ့ရည်းစားနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူနယ်နိမိတ် setting ကိုနည်းစနစ်တွေအများကြီးအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
သင်သည်သင်၏ခရီးအကြောင်းလူတွေကိုပြောပြသင့်သလော အဆိုပါ NoFap အသိုင်းအဝိုင်းဒီအပေါ်ပိုင်းခွဲပုံရသည်။ ငါဆိုသည်ကား, လုံးဝမရ !! သူတို့ကိုပိုကောင်းသငျသညျကွညျ့ရအောငျ, သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာဘာလဲတွေးမိ။ သူတို့သည်သင့်ကိုနှိပ်လျှင်, သင်ပိုအထဲကအလုပ်လုပ်ပိုကောင်းစားသုံးခြင်းနှင့်ထို့ထက် ပို. အိပ်ပျော်ခြင်းရတဲ့နေကသူတို့ကိုပြောပြပါ။ ဤအမှုအရာတို့ကိုဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏သော်လည်းသူတို့နေဆဲသင်သည်သံသယလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကြောင်း, သင်သည်သူတို့အပျေါမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ED ပြီးသွားရင်ဒီ subreddit ကပြwhatနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်၊ ​​PMO ကိုလုံးဝရပ်လိုက်တယ်၊ ကျွန်မရဲ့ဒစ်ကအခုအလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ​​ငါကမှစဖို့လိင်ကိစ္စအတွက်သာသုံးတယ်။ ဒါကိုစဉ်းစားနေရင်ရက်ပေါင်း ၃၀ အလေးအနက်ကြိုးစားပါ။ ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပဲ။
လူတိုင်းချီးမွမ်းနှင့်ကြင်နာစကားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကအသိုင်းအဝိုင်းအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် !!
LINK - Megatron's 90 ရက်ကြာအစီရင်ခံစာ - ED Cured၊ Life Redefined ။ ထို့အပြင်သိကောင်းစရာများ၊ စာဖတ်ခြင်းအကြောင်းအရာနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ